Methodszọ 5 iji mee snow snow keere n'ụlọ - Ikkaro
Inicio >> Nlekọta ụlọ >> Otu esi eme snow snow
Ihe ndị a bụ ihe anyị ga - eji maka nri niile.
Foamfụfụ afụ ọnụ (€ 0,9)
Ọka ọka (€ 2,2)
Conditioner (nke anyị nwere n'ụlọ, ọ na-eji obere)
Diaper na / ma ọ bụ sodium polyacrylate
Ana m ahapụ vidiyo nke m mere na-eme ụdị snow dị iche iche ka e wee hụ usoro ahụ nke ọma. Diazọ metụ akwa m echekwarala maka ikpeazụ. Enwere m vidio ole na ole ndị ọzọ dị njikere nke m ga-ezigara onwe ya na ntanetị. Ya mere ana m ahapụrụ gị njikọ a ka ị denye aha na ọwa Youtube
Ka anyi bata na nsogbu.
1zọ XNUMX - Na metụ akwa
Usoro iwu a dị mfe, anyị ahụla ma gụọ ya na saịtị narị narị ma ọ bụ puku kwuru puku. Anyị na-ewere ọtụtụ diaper, mepee ha ma wepụta owu nke na-eyi ka ọ banye pee. A na-agwakọta nke a na sodium polyacrylate.
Polyacrylate bụ polima nke nwere ike ịmịkọrọ ihe ruru 500 ugboro olu ya na mgbe ọ were mmiri ọ dị ka snow.
Ma nke a, nke bụ isi dị mfe na omume, achọtala m ụfọdụ nsogbu, nke anaghị m ahụ onye ọ bụla na-aza ajụjụ. Ma eleghị anya, ọ bụ m bụ onye keihuojoo.
A na-agwakọta Polyacrylate na eriri owu ma kewaa ya, ọ bụụrụ m nnukwu nsogbu. Agbalịrị m diaper abụọ, otu maka ndị okenye ka ha nwee ike inwe ọtụtụ na otu maka ụmụ ọhụrụ na otu ihe ahụ emeela ha abụọ, n'agbanyeghị agbanyeghị m na-ete eriri eriri, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụghị polymer dara mana igwe ojii gburugburu gị sere n'elu n'ikuku, mee nke owu eriri na m maa polima. Eziokwu m achọghị ka m loda ya, na-eche na ụmụ m nwanyị na-eku ume nke ahụ.
Ya mere, atụfuola m usoro a ruo mgbe m chọpụtara ụzọ dị mma ma dịkwa mma iji wepụ polyacrylate. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale uzommeputa a, ha na-ere ya n'ọtụtụ ebe.
Ọzọkwa anyị nwere ike ịzụta sodium polyacrylate dị ka ndị dị otú a.
Metzọ m na-ahụ dị ka ihe kwesịrị ekwesị maka ụmụaka na ihe m ga-etinye dị ka nwere maka ụmụaka dị ka ndị a:
2zọ XNUMX - Ọka na ụfụfụ
Ka anyị malite na Ntụ ọka na ịkpụ afụ ọnụ ụfụfụ.
Maizena bu ezigbo oka oka, azutara m ahia a mana inwere ike izuta ihe ozo, ihe di iche na nkpuru ahihia bu na o di nma, o kariri nke oma.
Anyị anaghị enye oke nkenke nke ngwakọta ahụ. N'ebe a, anyị ga-agbakwunye ọka na ụfụfụ ma jikọta ya ruo mgbe anyị nwetara ụdị achọrọ na snow.
Snow nke ejiri ọka na ụfụfụ mee nwere mmetụta dị nro dị nro nke ụmụaka na-amasịkarị. Ọ dịtụ acha ka ọ ghara inye ezigbo mmetụta snow, dịka na ngwakọta na bicarbonate.
Ihe ndị ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ ego ntụ ọka a, nke karịrị € 2 ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịme ego, ọ ga-adị oke ọnụ karịa na bicarbonate. Nakwa. Ọ bụghị ikwubiga okwu ókè na ọ na-aga ngwa ngwa, mana ọ na-emetọ ebe ọ bụla ị metụrụ aka.
3zọ XNUMX - na soda mmiri na ịfụfụ ụfụfụ
Ndị na-esonụ uzommeputa bụ na soda na ịkpụ afụ ụfụfụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, a na-ejikarị ụfụfụ akpụ afụ ọnụ na nnwale ụlọ, site na ụdị snow ndị a ruo ụdị slime dị iche iche.
Mgbe ịzụrụ bicarbonate nke soda, ana m akwado ka ị were akpa kilo ndị a dị oke ọnụ, ọ na-efu m 80 ma ọ bụ 90 cents. Ọ bụrụ na anyị ewere ite plastik, ọnụọgụ dị ntakịrị ma ọ dị oke ọnụ.
Usoro a bụ nke Cornstarch, anyị na-agbakwunye bicarbonate, ụfụfụ ma anyị agwakọta ma mezue ihe anyị chọrọ. Ọ bụrụ na ọ dị oke akpụ anyị ga-etinye bicarbonate ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị oke nro na mgbe anyị na-atụkọta ya anaghị edebe ihe ọ bụla n'ụdị n'ihi na anyị na-etinye ụfụfụ karịa. Ya mere, rue mgbe anyị chọtara udiri achọrọ.
N'adịghị ka snow gara aga, nke a dị ọcha, ma ọ na-ele anya na ọ dị ka ezigbo snow.
4zọ XNUMX - soda na mmiri
Anyị na-aga n'ihu na ihe ọ ghọọla usoro kachasị amasị m, na-eme snow na-enweghị atụ site na iji naanị mmiri soda na mmiri.
Ma ọ bụ na, ọ bụ ezie na ọ dị ka ụgha, snow a tụbara n'ụzọ dị otu a yiri nke ụfụfụ ahụ na nke ihe ndozi nke anyị ga-ahụ na njedebe. Nke ukwuu nke mere na ahaghị m akara efere nke ebe nchekwa snow dị; umu m nwanyi na egwu egwu mgbe ahu amaghi m nke bu. Naanị ihe m ji mara onye bụ Maizena ngwa ngwa.
Enwere m mmasị na ịme ka a mata ha n'ihi na achọrọ m ịhụ ka onye ọ bụla si mepụta ụbọchị ma na njedebe m enweghị nhọrọ ọ bụla karịa ịnwale ha, n'ihi na n'agbanyeghị etu m metụrụ ha aka, enweghị m ike ịmata ọdịiche dị na ha. Aka aka dị obere iche na nke ọ bụla, mana ọ dịghị ihe na-eme ka ị kwuo nke a dị nro dị nro ma ọ bụ site na ụfụfụ, dịka ọmụmaatụ.
Eji m nke a mee ihe iji cheta na m ga-esikwu ike na nnwale a ga-eme n’ọdịnihu ma dee ihe, mee ka ha mata nke ọma ma dee ihe niile na akwụkwọ ndetu ka ị ghara idafu oge na oge ma ọ bụ nlekọta ọ bụla n’oge nnwale ahụ.
Ntụziaka nke snow bụ otu ihe ahụ niile, bicarbonate mmiri na mix. Ikwesighi ịwụnye nnukwu mmiri.
Na mbu ekwuru m na o bu nke m kachasi nma n’ihi ọ bụrụ na anyị enweta nsonaazụ yiri ya, echere m na ihe kachasị mma bụ ịme ihe kachasị mfe. Ọ bụ eziokwu na ụmụaka na-enwe obere ihe na nke a, n'ihi na ọ na-amasị ha imetọ aka ha, mana nke a bụ ụdị dị ọnụ ala karịa ha niile.
Usoro 5 - ihe ndozi na soda
ikpeazụ Ntụziaka tupu na-akọwa ama ama metụ akwa usoro.
Na nke a, anyị ga - agwakọta conditioner na soda. Ọ bụ, echere m, usoro stickiest, n'ihi na ọ bụ ezie na ụfụfụ na-arapara ọtụtụ, mmetụ ahụ na-atọ ụtọ na ọ na-agwakọta ya ozugbo ma na-apụ n'aka. Ma conditioner na-eme ka aka gị nke nnyapade slimy, ahụghị m ya n'anya nke ukwuu, sinal na-agwakọta nke ọma ma na-ekewapụ n'aka gị, mana ha na-abụ ncha.
Have ga-etinye obere ego, etinye m nke ukwuu na iji nweta ezigbo udiri m nwere itinye otutu conditioner.
Snow yiri ka ọ dị arọ karịa nke gara aga, mana ọ bụ na mbido, mgbe awa ole na ole gafere ha niile enweghị ike ịkọwa.
Tụnyere nke ụdị nke keakamere snow
N'ebe a, anyị na-ahapụ metụ akwa ma ọ bụ sodium polyacrylate n'ihi na enweghị m ike ịnweta ya. Enweghi m ikeleghari ya ma tinye ya na ntule.
Na foto nke gallery bụ 4 snow nwetara. Ihe 3 bicarbonate a priori enweghị ike ịkọwa, mana lee nke ahụ maka Maizena. See na-ahụ ka ọ na-acha odo odo karịa.
Ndakpọ olileanya nke snow ahụ na-abịa mgbe awa 24 gachara, ngwakọta ahụ akpọnwụwo na ihe anyị hapụrụ dị ka a ga-asị na anyị nwere ọka ọka ma ọ bụ bicarbonate rụrụ arụ ma anyị ga-emegharị ngwakọta ahụ ma ọ bụ gbanye ya ka ọ were na-agbanwe agbanwe nke snow ọzọ. Ọ bụ ya mere usoro mmiri ji bụrụ nke kachasị amasị m.
Na nke a, ọ dị m mma karịa sodium polyacrylate, ebe m ghọtara na ọ na-anọ ogologo oge. Ozugbo m nwara ya, m ga-agwa gị ;-)
Otu esi emeghe ihuenyo site na ihuenyo agbaji
Ihe omumu iji muta ihe igwe, ihe omumu ...
Glass Glass: Nchịkọta Mkpokọta
Kọmputa m na-agbanye ma ọ nweghị ihe na-egosi na ihuenyo
Categories Nlekọta ụlọ, Nyocha maka ụmụaka Igodo bọtịnụ
2 kwuru na «Olee otú ime ka keakamere snow»
Disemba 21, 2018 na 9:39 pm
Daalụ. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ.
Disemba 22, 2018 na 11: 42am
Obi dị m ezigbo ụtọ na ị masịrị :)
N'oge na-adịghị onye nwere slime ;-)
1 1zọ XNUMX - Na metụ akwa
2 2zọ XNUMX - Ọka na ụfụfụ
3 3zọ XNUMX - na soda mmiri na ịfụfụ ụfụfụ
4 4zọ XNUMX - soda na mmiri
5 Usoro 5 - ihe ndozi na soda
6 Tụnyere nke ụdị nke keakamere snow
Arụ ụlọ roket